Ve ianao ny orinasa na ny orinasa ara-barotra?
Tsy izahay ihany no antsika manokana koa ny orinasa fa mizara amin'ny orinasa hafa.
Afaka manome santionany?
Eny, raha ny santionany fanononana tsy ampy amin'ny tahiry
Afaka handamina ny entana?
Antoka, dia manana entana forwarder maharitra izay afaka hahazo ny tsara indrindra avy amin'ny tena vidiny sambo orinasa ary manolotra asa fanompoana matihanina.
Inona no fotoana fanaterana?
Izany dia mifototra amin'ny ny lamina, raha ny tokony ho 15 - 20 andro aorian'ny fandraisana ny petra-bola na ny L / C amin'ny fahitana.
Ve ato aminareo fanaraha-maso ny kalitao?
Eny, efa nahazo BV , SGS fanamarinana.
Inona avy ireo fandoavam-bola ny teny?
100% hentitra no tsy miovaova L / C amin'ny fahitana. Na T / T , 30% mialoha, ary fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L ao anatin'ny 3-5 andro.